ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ - Shenzhen Okacc Industrial Co., Ltd.
ဤဝဘ်ဆိုဒ်ကို Shenzhen Okacc Industrial Co., Ltd. မှ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဆိုက်တစ်လျှောက်လုံးတွင် "ကျွန်ုပ်တို့"၊ "ကျွန်ုပ်တို့" နှင့် "ကျွန်ုပ်တို့၏" ဟူသော ဝေါဟာရများသည် Shenzhen Okacc Industrial Co., Ltd. ကိုရည်ညွှန်းပါသည်။ Shenzhen Okacc Industrial Co., Ltd. ဤဝဘ်ဆိုက်မှ ရရှိနိုင်သော အချက်အလက်များ၊ ကိရိယာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အပါအဝင် ဤဝဘ်ဆိုက်မှ သင်၊ အသုံးပြုသူ၊ ဤနေရာတွင် ဖော်ပြထားသည့် စည်းကမ်းချက်များ၊ အခြေအနေများ၊ မူဝါဒများနှင့် သတိပေးချက်များအားလုံးကို သင့်လက်ခံမှုအပေါ် သတ်မှတ်ပေးထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှတစ်ခုခုကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ "ဝန်ဆောင်မှု" တွင်ပါဝင်ပြီး အောက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ("ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ"၊ "စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ") ကိုသဘောတူသည် ဤနေရာတွင်ကိုးကားပြီး/သို့မဟုတ် ဟိုက်ပါလင့်ခ်ဖြင့် ရနိုင်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် ဘရောက်ဆာများ၊ ရောင်းချသူများ၊ ဖောက်သည်များ၊ ကုန်သည်များ၊ နှင့်/သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးပေးသူများဖြစ်သည့် ဘရောက်ဆာများ၊ ရောင်းချသူများ၊ ဖောက်သည်များ၊ ကုန်သည်များနှင့်/သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာကို ပံ့ပိုးပေးသူများ အပါအဝင် ဆိုက်၏အသုံးပြုသူအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုမီ ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို သေချာဖတ်ပါ။ ဝဘ်ဆိုက်၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများဖြင့် ချည်နှောင်ရန် သဘောတူပါသည်။ ဤသဘောတူညီချက်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များအားလုံးကို သင်သဘောမတူပါက၊ ထို့နောက် သင်သည် ဝဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုမျှ အသုံးပြုခြင်းမပြုနိုင်ပါ။ ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုဟု ယူဆပါက လက်ခံမှုကို ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများတွင် အတိအလင်း ကန့်သတ်ထားပါသည်။
လက်ရှိစတိုးတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ သို့မဟုတ် ကိရိယာအသစ်များသည်လည်း ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ဖြစ်ရမည်။ သင်သည် ဤစာမျက်နှာရှိ ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ၏ လက်ရှိဗားရှင်းကို အချိန်မရွေး ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်သို့ အပ်ဒိတ်များနှင့်/သို့မဟုတ် အပြောင်းအလဲများကို ပို့စ်တင်ခြင်းဖြင့် ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများ၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်၊ ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးပိုင်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ဝယ်ရှိပါသည်။ အပြောင်းအလဲများအတွက် ဤစာမျက်နှာကို အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးရန်မှာ သင့်တာဝန်ဖြစ်သည်။ အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုကို တင်ပြီးနောက် ဝဘ်ဆိုက်သို့ သင်ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းသည် အဆိုပါပြောင်းလဲမှုများကို လက်ခံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
အပိုင်း 1 – အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်စည်းကမ်းများ
ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို သဘောတူခြင်းဖြင့် သင်သည် အနည်းဆုံး သင့်ပြည်နယ် သို့မဟုတ် နေထိုင်သည့်ပြည်နယ်တွင် အသက်အရွယ် အများစုဖြစ်သည် သို့မဟုတ် သင်သည် သင့်ပြည်နယ် သို့မဟုတ် နေထိုင်သည့်ပြည်နယ်တွင် အများစု၏အသက်ဖြစ်ကြောင်းကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား သင့်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပေးထားသည်။ သင့်အသေးစား မှီခိုသူတိုင်းကို ဤဆိုက်ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကို တရားမဝင် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အသုံးပြုခြင်းမပြုရသည့်အပြင် ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရာတွင် သင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိဥပဒေများ (မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများအပါအဝင်သော်လည်းကောင်း အကန့်အသတ်မရှိ) ကို ချိုးဖောက်ခြင်းမပြုရပါ။
သန်ကောင် သို့မဟုတ် ဗိုင်းရပ်စ်များ သို့မဟုတ် အဖျက်သဘောသဘာဝ၏ ကုတ်နံပါတ်ကို သင်မပို့သင့်ပါ။
စည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများအားလုံးကို ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ခြင်းသည် သင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို ချက်ခြင်းရပ်စဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အပိုင်း2– အထွေထွေအခြေအနေများ
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို မည်သူ့ကိုမဆို ဝန်ဆောင်မှုကို အချိန်မရွေး ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ဝယ်ရှိပါသည်။
သင့်အကြောင်းအရာ (ခရက်ဒစ်ကတ်အချက်အလက်မပါဝင်) ကို ကုဒ်ဝှက်မထားဘဲ လွှဲပြောင်းနိုင်ပြီး ကွန်ရက်အမျိုးမျိုးရှိ (က) ထုတ်လွှင့်မှုများတွင် ပါဝင်နိုင်ကြောင်း သင်နားလည်ပါသည်။ နှင့် (ခ) ကွန်ရက်များ သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာများ ချိတ်ဆက်ခြင်း၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် အပြောင်းအလဲများ။ ကွန်ရက်များမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းရာတွင် ခရက်ဒစ်ကတ် အချက်အလက်ကို အမြဲတမ်း ကုဒ်ဝှက်ထားသည်။
ဝန်ဆောင်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပွားခြင်း၊ မိတ္တူကူးခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးချခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသည့် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ အဆက်အသွယ်တစ်ခုခုကို ကျွန်ုပ်တို့မှ အမြန်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စာဖြင့်ရေးသားခြင်းမပြုရန် သဘောတူပါသည်။ .
ဤသဘောတူညီချက်တွင် အသုံးပြုသည့် ခေါင်းစဉ်များသည် အဆင်ပြေစေရန်အတွက်သာ ပါဝင်ပြီး ကန့်သတ်ချက်များ သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ဤစည်းမျဥ်းများကို ထိခိုက်စေမည်မဟုတ်ပါ။
အပိုင်း3– အချက်အလက်များ၏ တိကျမှု၊ ပြည့်စုံမှုနှင့် အချိန်သတ်မှတ်မှု
ဤဆိုက်တွင် ရရှိနိုင်သော အချက်အလက်များသည် တိကျမှု၊ ပြည့်စုံမှု သို့မဟုတ် လက်ရှိမဟုတ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ။ ဤဆိုက်ရှိအကြောင်းအရာအား ယေဘူယျအချက်အလက်များအတွက်သာ ထောက်ပံ့ပေးထားပြီး အဓိက၊ ပိုတိကျသည်၊ ပိုမိုပြည့်စုံသော သို့မဟုတ် အချိန်မီ သတင်းအရင်းအမြစ်များကို မတိုင်ပင်ဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်အတွက် တစ်ခုတည်းသောအခြေခံအဖြစ် တစ်ခုတည်းသောအခြေခံအဖြစ် အသုံးမပြုသင့်ပါ။ ဤဆိုက်ရှိ ပစ္စည်းအပေါ် မှီခိုအားထားမှုသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်ဖြစ်သည်။
ဤဆိုက်တွင် အချို့သော သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ သမိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ သေချာပေါက်၊ လက်ရှိမဟုတ်ပဲ သင့်အကိုးအကားအတွက်သာ ပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆိုက်၏ အကြောင်းအရာများကို အချိန်မရွေး ပြုပြင်မွမ်းမံပိုင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုက်ပေါ်ရှိ မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမျှ အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် တာဝန်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင် ပြောင်းလဲမှုများကို စောင့်ကြည့်ရန် သင့်တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။
အပိုင်း4– ဝန်ဆောင်မှုနှင့် စျေးနှုန်းများကို ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များအတွက် စျေးနှုန်းများသည် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်မရွေး အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ဝန်ဆောင်မှု (သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာ) ကို ပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ရပ်ဆိုင်းရန် အချိန်မရွေး လက်ဝယ်ရှိပါသည်။
ပြုပြင်မွမ်းမံမှု၊ စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှု၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအတွက် တာဝန်မကင်းပါ။
အပိုင်း5– ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
အချို့သော ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများသည် ဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် အွန်လိုင်းတွင် သီးသန့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများသည် ကန့်သတ်ပမာဏများ ရှိနိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြန်ပို့မှုမူဝါဒအရသာ ပြန်လည်လဲလှယ်ရန် သို့မဟုတ် လဲလှယ်နိုင်ပါသည်။
စတိုးဆိုင်တွင် ပေါ်လာသော ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရောင်များနှင့် ပုံများကို တတ်နိုင်သမျှ တိကျစွာပြသရန် ကျွန်ုပ်တို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားထားပါသည်။ သင့်ကွန်ပြူတာမော်နီတာ၏ မည်သည့်အရောင်ဖော်ပြမှုမှ တိကျမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အာမမခံနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ပထဝီဝင်ဒေသ သို့မဟုတ် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုမဆို ရောင်းချခြင်းကို ကန့်သတ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း တာဝန်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအခွင့်အရေးကို ကိစ္စတစ်ခုချင်းအလိုက် ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည့် မည်သည့်ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ ပမာဏကိုမဆို ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်စျေးနှုန်းဖော်ပြချက်အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မည်သည့် ထုတ်ကုန်ကိုမဆို အချိန်မရွေး ရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံပါသည်။ ဤဆိုက်တွင်ပြုလုပ်သည့် မည်သည့်ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအတွက်မဆို ကမ်းလှမ်းမှုမှန်သမျှသည် တားမြစ်ထားသည့်နေရာတွင် ပျက်ပြယ်သွားပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် သင်ဝယ်ယူသော သို့မဟုတ် ရရှိသော အခြားပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးသည် သင့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီလိမ့်မည် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရှိ အမှားအယွင်းများကို ပြုပြင်ပေးမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ အာမမခံနိုင်ပါ။
အပိုင်း6- ငွေပေးချေခြင်းနှင့် အကောင့်အချက်အလက်များ၏ တိကျမှု
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သင်တင်ထားသော မည်သည့်အမိန့်စာကိုမဆို ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ဝယ်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်အရ၊ လူတစ်ဦးစီ၊ အိမ်တစ်အိမ်လျှင် သို့မဟုတ် မှာယူမှုတစ်ခုအတွက် ဝယ်ယူသည့်ပမာဏကို ကန့်သတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များတွင် တူညီသောဝယ်ယူသူအကောင့်မှ သို့မဟုတ် လက်အောက်ရှိ မှာယူမှုများ၊ တူညီသော ခရက်ဒစ်ကတ်နှင့် တူညီသောငွေပေးချေမှုနှင့်/သို့မဟုတ် ပို့ဆောင်ရေးလိပ်စာကို အသုံးပြုသည့် မှာယူမှုများ ပါဝင်သည်။ အမှာစာတစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ခြင်းကိစ္စရပ်တွင်၊ မှာယူမှုပြုလုပ်ချိန်တွင် ပေးထားသည့် အီးမေးလ်နှင့်/သို့မဟုတ် ငွေပေးချေသည့်လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် သင့်ထံအကြောင်းကြားရန် ကြိုးပမ်းနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းစီရင်ချက်တွင်၊ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြန်လည်ရောင်းချသူများ သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးသူများမှ ထားရှိပုံပေါ်သော အမိန့်များကို ကန့်သတ်ရန် သို့မဟုတ် တားမြစ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ဝယ်ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စတိုးတွင်ဝယ်ယူမှုအားလုံးအတွက် လက်ရှိ၊ ပြီးပြည့်စုံပြီး တိကျသောဝယ်ယူမှုနှင့် အကောင့်အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်ရန် သင်သဘောတူပါသည်။ သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် ခရက်ဒစ်ကတ်နံပါတ်များနှင့် သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်စွဲများအပါအဝင် သင့်အကောင့်နှင့် အခြားအချက်အလက်များကို ဆောလျင်စွာ အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် သဘောတူသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ငွေလွှဲမှုများကို အပြီးသတ်ပြီး လိုအပ်သလို ဆက်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်ပို့ခြင်းမူဝါဒကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
အပိုင်း7– ရွေးချယ်နိုင်သော ကိရိယာများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် စောင့်ကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းခြင်း မရှိသော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ကိရိယာများကို သင့်အား ဝင်ရောက်ခွင့် ပေးနိုင်ပါသည်။
မည်သည့်အာမခံချက်၊ ကိုယ်စားပြုမှုများ သို့မဟုတ် အခြေအနေမျိုးနှင့်မဆို ထောက်ခံချက်မရှိဘဲ “ဖြစ်နိုင်သည်” နှင့် “ရနိုင်သလောက်” တို့ကို သင် အသိအမှတ်ပြုပြီး သဘောတူလက်ခံပါသည်။ သင်ရွေးချယ်နိုင်သော ပြင်ပကုမ္ပဏီကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် သို့မဟုတ် ပတ်သက်သည့် မည်သည့်တာဝန်ယူမှုမျှ ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် ပေးဆောင်ထားသော ရွေးချယ်နိုင်သော ကိရိယာများကို သင်အသုံးပြုမှုတိုင်းသည် သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် လုံးဝသက်ဆိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ပြင်ပကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှုပေးသူ(များ) မှ ပေးဆောင်ထားသည့် ကိရိယာများကို သင်ရင်းနှီးပြီး အတည်ပြုကြောင်း သေချာစေသင့်သည်။
အနာဂတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များနှင့်/သို့မဟုတ် အင်္ဂါရပ်များကို ပေးဆောင်နိုင်သည် (ကိရိယာများနှင့် အရင်းအမြစ်အသစ်များ အပါအဝင်)။ ထိုကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များနှင့်/သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများသည်လည်း ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ ဖြစ်ရမည်။
အပိုင်း ၈ – တတိယပါတီ လင့်ခ်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်သော အချို့သောအကြောင်းအရာ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ ပစ္စည်းများ ပါဝင်နိုင်သည်။
ဤဆိုက်ရှိ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းလင့်ခ်များသည် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မသက်ဆိုင်သော ပြင်ပဝဘ်ဆိုက်များသို့ လမ်းညွှန်ပေးနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် တိကျမှုကို စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်များအတွက် သို့မဟုတ် အခြားပစ္စည်းများ၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် မည်သည့်တာဝန်ယူမှု သို့မဟုတ် တာဝန်မျှရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အရင်းအမြစ်များ၊ အကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် ပြင်ပကုမ္ပဏီ ဝဘ်ဆိုက်များနှင့် ဆက်စပ်၍ ပြုလုပ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အရင်းအမြစ်များ၊ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဝယ်ယူအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ မူဝါဒများနှင့် အလေ့အကျင့်များကို ဂရုတစိုက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး မည်သည့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွင်မဆို သင်မပါဝင်မီ ၎င်းတို့ကို နားလည်ကြောင်း သေချာပါစေ။ ပြင်ပကုမ္ပဏီ ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်သည့် တိုင်ကြားမှုများ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ စိုးရိမ်မှုများ သို့မဟုတ် မေးခွန်းများကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းထံ ညွှန်ကြားသင့်သည်။
အပိုင်း9– သုံးစွဲသူများ၏ မှတ်ချက်များ၊ တုံ့ပြန်ချက်များနှင့် အခြားတင်ပြချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏တောင်းဆိုချက်အရ၊ သင်သည် သတ်မှတ်ထားသော တင်သွင်းမှုများ (ဥပမာ ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်များ) ကို ပေးပို့ပါက သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ တောင်းဆိုမှုမရှိဘဲ သင်သည် ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ အဆိုပြုချက်များ၊ အစီအစဉ်များ သို့မဟုတ် အခြားအရာများကို အွန်လိုင်း၊ အီးမေးလ်ဖြင့်၊ စာတိုက်မှဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အခြားအရာများကို ပေးပို့နိုင်သည်။ (စုပေါင်း၊ 'မှတ်ချက်များ')၊ ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ အချိန်မရွေး၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် အခြားနည်းဖြင့် သင်ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့သော မည်သည့်မှတ်ချက်မဆို မည်သည့်ကြားခံတွင်မဆို အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ မှတ်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းထားရန် တာဝန်မရှိပါ (၁)၊ (၂) မှတ်ချက်များအတွက် လျော်ကြေးပေးရန်၊ သို့မဟုတ် (၃) မှတ်ချက်များကို တုံ့ပြန်ရန်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားသော အကြောင်းအရာများသည် ဥပဒေမဲ့၊ ပုတ်ခတ်မှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ အသရေဖျက်မှု၊ အသရေဖျက်မှု၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ ညစ်ညမ်းသော သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ကန့်ကွက်ရန် တာဝန်မရှိနိုင်သော်လည်း မည်သည့်ပါတီ၏ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု သို့မဟုတ် ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်သည်ဖြစ်စေ .
သင်၏မှတ်ချက်များသည် မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သို့မဟုတ် အခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သို့မဟုတ် မူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများအပါအဝင် မည်သည့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏အခွင့်အရေးကိုမဆို ချိုးဖောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။ သင့်မှတ်ချက်များတွင် အသရေဖျက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဥပဒေမဲ့၊ ရိုင်းစိုင်းသော သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းသောပစ္စည်းများ၊ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု၏လုပ်ဆောင်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် အခြား malware ပါဝင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။ သင်သည် မှားယွင်းသော အီးမေးလ်လိပ်စာကို အသုံးမပြုရ၊ သင်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်သော အခြားသူတစ်ဦးအဖြစ် ဟန်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် မှတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ၏ မူလအစအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းကို လှည့်ဖြားခြင်းမပြုရပါ။ သင်ပြုလုပ်သော မှတ်ချက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ တိကျမှုများအတွက် သင့်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တာဝန်မယူဘဲ သင် သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ တင်ထားသော မည်သည့်မှတ်ချက်များအတွက်မျှ တာဝန်မယူပါ။
အပိုင်း 10 – ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်
စတိုးဆိုင်မှတဆင့် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို တင်ပြခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒဖြင့် အုပ်ချုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို ကြည့်ရှုရန်။
အပိုင်း 11 – အမှားအယွင်းများ၊ မှားယွင်းမှုများနှင့် လွဲချော်မှုများ
ရံဖန်ရံခါတွင် ထုတ်ကုန်ဖော်ပြချက်၊ ဈေးနှုန်း၊ ပရိုမိုးရှင်းများ၊ ကမ်းလှမ်းချက်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ချိန်နှင့် ရရှိနိုင်မှုတို့နှင့် ဆက်စပ်နိုင်သည့် စာစီစာကုံးအမှားများ၊ မှားယွင်းမှုများ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုများပါရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုတွင် ရံဖန်ရံခါတွင် အချက်အလက်ရှိနိုင်ပါသည်။ အမှားအယွင်းများ၊ မှားယွင်းမှုများ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုများကို ပြုပြင်ရန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအတွင်း သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ဝဘ်ဆိုက်ရှိ အချက်အလက်တစ်ခုခု မှားယွင်းနေပါက ကြိုတင်သတိပေးချက်မရှိဘဲ အချိန်မရွေး (သင့်မှာယူမှုတင်သွင်းပြီးနောက် အပါအဝင်) ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် အပ်ဒိတ် သို့မဟုတ် အမှာစာများကို ပယ်ဖျက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေးကို ကန့်သတ်ထားပါသည်။ .
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝန်ဆောင်မှုတွင် ကန့်သတ်ချက်မရှိ၊ စျေးနှုန်းအချက်အလက်များ အပါအဝင်၊ ဥပဒေအရ လိုအပ်သည်မှလွဲ၍ ဝန်ဆောင်မှုတွင် အချက်အလက်များကို အပ်ဒိတ်၊ ပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ရှင်းလင်းရန် တာဝန်မရှိပါ။ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် အသုံးပြုသည့် သတ်မှတ်ထားသော အပ်ဒိတ် သို့မဟုတ် ပြန်လည်ဆန်းသစ်သည့်ရက်စွဲမရှိပါ၊ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ဝဘ်ဆိုက်ရှိ အချက်အလက်အားလုံးကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း သို့မဟုတ် အပ်ဒိတ်လုပ်ထားကြောင်း ညွှန်ပြရန် လုပ်ဆောင်သင့်သည်။
အပိုင်း 12 – တားမြစ်ထားသောအသုံးပြုမှုများ
ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများတွင်ဖော်ပြထားသည့်အခြားတားမြစ်ချက်များအပြင်၊ ဆိုက် သို့မဟုတ် ၎င်း၏အကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုခြင်းမှ သင့်ကိုတားမြစ်ထားသည်- (က) ဥပဒေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုအတွက်၊ (ခ) တရားမ၀င်သော လုပ်ရပ်များတွင် အခြားသူများအား တောင်းခံခြင်း သို့မဟုတ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ (ဂ) နိုင်ငံတကာ၊ ဖက်ဒရယ်၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပြည်နယ် စည်းမျဉ်းများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ ဥပဒေများ သို့မဟုတ် ဒေသဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ (ဃ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အခြားသူများ၏ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ထိပါးခြင်း သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ (င) ကျား၊ မ၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှု၊ ဘာသာ၊ လူမျိုး၊ လူမျိုး၊ အသက်အရွယ်၊ နိုင်ငံသားဇာတိ၊ သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းမှုအပေါ် အခြေခံ၍ နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ အလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ စော်ကားခြင်း၊ ထိခိုက်နစ်နာစေခြင်း၊ (စ) မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် အထင်အမြင်လွဲမှားစေသော အချက်အလက်များကို တင်ပြရန်၊ (ဆ) ဗိုင်းရပ်စ်များ အပ်လုဒ်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပို့လွှတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် လည်ပတ်မှုကို ထိခိုက်စေမည့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသော ကုဒ်အမျိုးအစား သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ဝဘ်ဆိုက်၊ အခြားဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် အင်တာနက်၊ (ဇ) အခြားသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန် သို့မဟုတ် ခြေရာခံရန်၊ (i) spam၊ phish၊ pharm၊ အကြောင်းပြချက်၊ ပင့်ကူ၊ တွားသွား သို့မဟုတ် ခြစ်ရန်၊ (ည) ညစ်ညမ်းသော သို့မဟုတ် အကျင့်ပျက်စေသော ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုအတွက်၊ သို့မဟုတ် (ဋ) ဝန်ဆောင်မှု၏ လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဝဘ်ဆိုဒ်၊ အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များ သို့မဟုတ် အင်တာနက်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် ရှောင်တိမ်းရန်။ တားမြစ်ထားသောအသုံးပြုမှုများကို ချိုးဖောက်သည့်အတွက် သင်၏ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုမှုအား ရပ်ဆိုင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့က ကန့်သတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အပိုင်း 13 – အာမခံချက်၏ငြင်းဆိုချက်၊ တာဝန်ဝတ္တရား ကန့်သတ်ချက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို သင်၏အသုံးပြုမှုသည် အနှောက်အယှက်ကင်းကင်း၊ အချိန်မီ၊ လုံခြုံမှု သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းကင်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့က အာမခံ၊ ကိုယ်စားပြု သို့မဟုတ် အာမခံမည်မဟုတ်ပါ။
ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းမှ ရရှိနိုင်သော ရလဒ်များသည် တိကျ သို့မဟုတ် ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အာမမခံနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်အကန့်အသတ်မရှိ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဝန်ဆောင်မှုကို ဖယ်ရှားနိုင်သည် သို့မဟုတ် သင့်အား အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ အချိန်မရွေး ဝန်ဆောင်မှုကို ပယ်ဖျက်နိုင်ကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။
ဝန်ဆောင်မှုကို သင်၏အသုံးပြုမှု၊ သို့မဟုတ် အသုံးမပြုနိုင်မှုမှာ သင့်တစ်ဦးတည်းသော အန္တရာယ်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောတူပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် သင့်ထံပေးပို့သော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးသည် (ကျွန်ုပ်တို့အတိအလင်းဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းမှလွဲ၍) သင့်အသုံးပြုမှုအတွက် 'အဖြစ်' နှင့် 'ရရှိနိုင်သလောက်' တို့ကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ သွယ်ဝိုက်သောအာမခံချက်များ သို့မဟုတ် ရောင်းဝယ်နိုင်မှုအခြေအနေများ၊ ရောင်းဝယ်နိုင်သော အရည်အသွေး၊ သီးခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် ကြံ့ခိုင်မှု၊ တာရှည်ခံမှု၊ ခေါင်းစဉ်နှင့် ချိုးဖောက်မှုမရှိခြင်းအပါအဝင် သွယ်ဝိုက်ဖော်ပြသည်။
Shenzhen Okacc Industrial Co., Ltd.၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒါရိုက်တာများ၊ အရာရှိများ၊ ဝန်ထမ်းများ၊ လုပ်ငန်းခွဲများ၊ အေးဂျင့်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ အလုပ်သင်များ၊ ပေးသွင်းသူ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရှိသူတို့သည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ တောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်၊ သွယ်ဝိုက်သော၊ ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ ဆုံးရှုံးသွားသော အမြတ်အစွန်းများ၊ ဝင်ငွေဆုံးရှုံးခြင်း၊ စုဆောင်းငွေဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဒေတာဆုံးရှုံးခြင်း၊ အစားထိုးကုန်ကျစရိတ် သို့မဟုတ် အလားတူပျက်စီးမှုများအပါအဝင်၊ ကန့်သတ်ချက်မရှိသော မည်သည့်အမျိုးအစားမဆို မတော်တဆထိခိုက်မှု၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှု (ပေါ့ဆမှုအပါအဝင်) တင်းကျပ်သော၊ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု သို့မဟုတ် သင့်အသုံးပြုမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော တာဝန်ဝတ္တရား သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ဝယ်ယူသည့် ထုတ်ကုန်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် သင့်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မဆို သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုတွင် အကန့်အသတ်မရှိ အမှားအယွင်းများ သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်မရှိ အပါအဝင်၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုတွင် ချန်လှပ်ထားခြင်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ ဖြစ်နိုင်ခြေကို အကြံပြုထားသော်လည်း ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်သော အကြောင်းအရာ (သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်) တစ်ခုခု (သို့မဟုတ်) ပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အချို့သောပြည်နယ်များ သို့မဟုတ် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများသည် ချန်လှပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အကျိုးဆက် သို့မဟုတ် မတော်တဆထိခိုက်မှုများအတွက် တာဝန်ယူမှုအား ကန့်သတ်ခြင်းအား ခွင့်မပြုသောကြောင့်၊ ထိုကဲ့သို့သော ပြည်နယ်များ သို့မဟုတ် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားသည် ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ ကန့်သတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ပုဒ်မ ၁၄ – လျော်ကြေးပေးခြင်း
သင်သည် အန္တရာယ်မရှိသော Shenzhen Okacc Industrial Co., Ltd. နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိဘ၊ လုပ်ငန်းခွဲများ၊ တွဲဖက်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ အေးဂျင့်များ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ လိုင်စင်ရှိသူများ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ အလုပ်သင်များနှင့် ဝန်ထမ်းများကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ လျော်ကြေးပေးရန်၊ ခုခံကာကွယ်ပေးပြီး သိမ်းထားရန် သဘောတူညီပါသည်။ သင်၏ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် ကိုးကား၍ထည့်သွင်းထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများ သို့မဟုတ် သင့်ဥပဒေတစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့် သို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်ခြင်းကြောင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောရှေ့နေအခကြေးငွေများအပါအဝင်၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောရှေ့နေများ၏အခကြေးငွေအပါအဝင်တောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှု -ပါတီ။
အပိုင်း 15 – ပြင်းထန်မှု
ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ရပ်ရပ်သည် တရားမ၀င်၊ ပျက်ပြယ်သွားခြင်း သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးခြင်းမပြုနိုင်ဟု ဆုံးဖြတ်ပါက၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အဆိုပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်သည် တည်ဆဲဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာအထိ အပြည့်အဝ ကျင့်သုံးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အာဏာမတည်နိုင်သော အပိုင်းကို ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများမှ ခွဲထုတ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ ဝန်ဆောင်မှု၊ ယင်းဆုံးဖြတ်ချက်သည် အခြားကျန်ရှိသော ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၏ တရားဝင်မှုနှင့် ခိုင်လုံမှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။
အပိုင်း 16 – ရပ်စဲခြင်း
ရပ်စဲသည့်နေ့မတိုင်မီ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပါတီများ၏ တာဝန်များနှင့် တာဝန်ခံမှုများသည် ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးအတွက် ဤသဘောတူညီချက်ကို ရပ်စဲခြင်းမှ ဆက်လက်ရှင်သန်စေမည်ဖြစ်သည်။
သင် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့မှ ရပ်စဲခြင်းမပြုပါက ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းများသည် အကျုံးဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးမပြုတော့ဘဲ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုဒ်ကို သင်အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့်အခါတွင် သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများကို အချိန်မရွေး ရပ်စဲနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ခုတည်းသောစီရင်ချက်တွင် သင်သည် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် သင်ပျက်ကွက်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သံသယရှိပါက ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများကိုလိုက်နာရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ အချိန်မရွေး ဤသဘောတူညီချက်ကို ရပ်စဲနိုင်ပြီး ပေးဆောင်ရမည့်ငွေအားလုံးအတွက် သင့်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ရပ်စဲသည့်နေ့စွဲနှင့် အပါအဝင်၊ နှင့်/သို့မဟုတ် လျော်ညီစွာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ (သို့မဟုတ် ယင်း၏ အစိတ်အပိုင်း) သို့ သင့်အား ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်နိုင်သည်။
အပိုင်း 17 – သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံး
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများဆိုင်ရာ အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ကျင့်သုံးရန် သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးရန် သို့မဟုတ် လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ထိုအခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို စွန့်လွှတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ဤ site ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တင်ထားသောမူဝါဒများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများသည် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင်နားလည်မှုအပြည့်ရှိကာ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းကို အုပ်ချုပ်ရန်၊ မည်သည့်မတိုင်မီ သို့မဟုတ် ခေတ်ပြိုင်သဘောတူညီချက်များ၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် အဆိုပြုချက်များကို ကျော်လွန်နေသည် နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြား (ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ ၏ ယခင်ဗားရှင်းများအပါအဝင်)။
ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းများ၏ အနက်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ကွဲလွဲချက်များ တစ်စုံတစ်ရာကို မူကြမ်းရေးဆွဲသည့်အဖွဲ့နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုရ။
ပုဒ်မ 18 - အုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ
အပိုင်း 19 – ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ပြောင်းလဲသည်။
သင်သည် ဤစာမျက်နှာတွင် ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၏ လက်ရှိအကျဆုံးဗားရှင်းကို အချိန်မရွေး ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ အပ်ဒိတ်များနှင့် အပြောင်းအလဲများကို ပို့စ်တင်ခြင်းဖြင့် ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းများ၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်၊ ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အခွင့်အရေးကို ကျွန်ုပ်တို့လက်ဝယ်ရှိပါသည်။ အပြောင်းအလဲများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးရန်မှာ သင့်တာဝန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ဤဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲတစ်ခုခုကို တင်ပြီးနောက် သင်ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းသည် အဆိုပါအပြောင်းအလဲများကို လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။
အပိုင်း 20 – ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်
ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများဆိုင်ရာမေးခွန်းများကို info@okacc.com တွင်ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးပို့သင့်သည်။